म विवाहित महिला हुँ, यौन सम्पर्कमा पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन्न - Lekbesi Khabar
म विवाहित महिला हुँ, यौन सम्पर्कमा पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन्न
तपाईले धेरैजनाको समस्याको समाधान गरिरहनु भएको कुरा अनलाइनखवरमा तपाईंका लेख पढेर थाहा पाइरहेकी छु । मेरो पनि समस्या ठीक हुने आशामा मैले समस्या पठाएकी हुँ । यस्ता समस्या अरु महिलामा पनि हुन सक्छन् । तर, यसरी खुलेर भन्न सक्तैनन् । सायद तपाईंको उत्तरले उनीहरुलाई पनि राहत महसुस हुनेछ ।
म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको ३ वर्ष भयो । श्रीमानको र मेरो सल्लाह अनुसार हामीले अहिलेसम्म सन्तान जन्माएका छैनौं । हामीमा कुनै स्वास्थय समस्या छैन । हामी एक अर्कालाई माया पनि गर्छौ । तर, यौन सम्र्पकको कुरा गर्दा धेरैजसो समयमा म आफूले सन्तुष्टिको अनुभूति नगरेको महसूस हुन्छ । म आफू मात्रै होइन, श्रीमानले पनि पूर्ण सन्तुष्टिको महसूस गर्नु हुन्न । मेरो यस्तै अवस्था भयो भने भविष्यमा के होला, कतै श्रीमानले पछि गएर अरुसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नु हुने हो कि भन्ने पीर लाग्छ ।
कहिलेकाहीँ मैले कतै श्रीमानलाई असन्तुष्ट बनाइराखेको त छैन भन्ने पनि लाग्छ । तपाईकै लेखहरुमा पढेअनुसार यौन सन्तुष्टिका लागि फोर प्ले आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा भयो । तर, श्रीमानसँग यस किसिमको अनुभव छैन । मैले यस विषयमा कुरा गर्दा पनि यस विषलाई महत्व दिनु हुन्न । यसरी सन्तुष्टि नहुँदा हामी दुवैजनालाई यौन सम्र्पकपछि दुखाइको अनुभव हुन्छ र हामी दुबैबीच लामो दिनसम्म यौन सम्बन्ध हुदैन । यो कस्तो समस्या हो ? यसबाट मुक्ति पाउन केही उपाय छन् कि ?
१८ कार्तिक २०७५, आईतवार ०८:३४ November 4, 2018